Gịnị Mere O Ji Dị Mkpa Akwa Ahụ?
site ha na 20-06-23
Ndị ọbịa ụlọ nwere ike ịbịara gị ogologo oge. Nwere ike izere ịsụcha si na ime ụlọ ịwụ gaa n'ụlọ gị mgbe ị nwere uwe mwụda. Bathlọ ịsa ahụ nke toro ogologo iji kpuchie gị bụ azịza zuru oke nye onye ikwu na-aghọtaghị mkpa nzuzo gị. Debe akwa mmiri na aka maka h ...
Gịnị ka akwaa akwa nkpuchi na-eme?
Onye na-echebe matarasị na-arụzu ihe anọ: Na-eme ka akwa ụra dị ọcha. Ahụ mmadụ dị oke mma. Anyị niile na-agba ọsụsọ n'abalị. Anyị niile na-esi na akpụkpọ anyị emepụta mmanụ. Offọdụ n'ime anyị na-ete ihe ntecha. Anyị niile na-awụpụkwa mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ. Enwere ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịmịpụta "ntụpọ mmiri" na nke ...
Gịnị bụ ohiri isi n'echebe na Gịnị Mere You Chọrọ Otu?
N'ihe banyere ihi ụra, ọtụtụ na-elekwasị anya na mpempe akwụkwọ na ohiri isi n'onwe ya. Agbanyeghị, enwere ihe dị mkpa nke nchịkọta akwa gị nke nwere ike ịgbatị ndụ nke ohiri isi gị: onye na-echebe ohiri isi. A ohiri isi n'echebe zippers mechie, na-enye ihe mgbochi megide nkịtị allergens otú i nwere ike na-enweta nke ...